Machine kala firidhsan, Planetary fiicni, dersey Machine, emulsion saar - longxin
13 Shiinaha International Battery Fair The Haysta guul From Ma ... [Jun-07-2018]
Longxin Help Abaabulaan ah "INT'L SARID CUSUB Forum ON sheeko TECHNOLO ... [May-03-2018]
keydinta tamarta la oolnimada sare
Sida Firdhisan xirfadeed oo ku shiidi saaridda mashiinka, Longxin sii casriyeeyo technology oo bilaabeyna mashiinka cusub si loo yareeyo isticmaalka awooda, siinta macaamiisha la-soo-saarka oolnimada sare.
Nano technology la fineness kaamil ah
Iyada oo daba jooga ah ee fineness wax, Longxin leh status sharafeed wax micro-Nano diyaarinta danbeeyay iyo goobta imtixaanka warshadaha. Qaab dhismeedka Firdhisan Turbo iyo design-dhismeedka rotor gaar ah u samayso wax gaari Nano-meter.
Specilist waayo, wax ku nafwaayay sare
Si loo xaliyo dhibaatada shiidi iyo Faafi wax ku nafwaayay sare, Longxin dhigaysa dhowr horumar qaabka mishiinka, keeno sahlanaato in ay kabayso, UV kabayso, line-soo-saarka daabacaadda Xariir.
---- Products Featured ----
Shirkadda Our ku yaallaa aag horumarinta Hengshanqiao Town, bari ee Changzhou. Waa meel u dhaw in ay Rail Shanghai High Speed, Nanjin Urban Railway iyo Shanghai-Chengdu Expressway oo u dhow wajiha of Hengshan Bridge. Shirkadda Tani waa unug taagan wakiilka of China Daabacaadda khad Association.
Shirkadda midaynaysa cilmi, horumarka iyo soo saaridda ee ay jidh keliya oo uu leeyahay technology hormartay, ciidanka farsamo awood leh oo waa qof ku taqasustay wax soo saarka ee "Huabao Brand" taxane saddex Furimaha duuban oo dhagax kuusha. taxane DS tiro gacanta saddex Furimaha rullaluistemadka waa mid gaar ah ee Shiinaha. Shirkadda Our waa hogaamiyaha ee daabacaadda in industry saarka. Waxaan la qorsheeyo karo line-soo-saarka mashiinka khad ...
---- Macaamiisha Our Qaayaha ----